Parlemantera any Sofia : « Ampihorohoroana ireo ben’ny Tanàna » | NewsMada
Nampiaka-peo sady hentitra. « Very tanteraka ny demokrasia ary tsy voahaja ny fanjakana tan-dalàna. Mbola manjaka tanteraka ny fampihorohoroana any amin’ny faritra Sofia vokatry ny fifidianana loholona natao farany teo. Mbola hampihorohorona hosoloina PDS avokoa ireo ben’ny Tanàna tsy nifidy ny kandidam-panjakana », hoy ireo depiote sy loholona voafidy any amin’ny faritra Sofia tetsy Tsimbazaza, omaly. Nitarika izany ny loholona sy depiote isany, ny Kly Lylison René, Velontsara Paul Bert, Marie Angele…
Tsy vitan’izany fa tsy omen’ny minisiteran’ny Atitany fanampiana koa ireo kaominina tsy nandany ny HVM ka nahatonga ireto olom-boafidy ireto nametra-panontaniana. « Iza no tompon’antoka amin’izao olana rehetra misy izao? Ny minisitra napetraka ho mpiahy « coach », tsy mahavita mamaha olana. Vao mainka mampitombo indray sy manampy trotraka“, hoy ihany izy ireo.
Tsy hita ny minisitry ny Atitany
Nambaran’ireto depiote sy senatera ireto fa toa ataon’ny fanjakana an-jorom-bala sy ambaniana ireo zanaky ny faritra Sofia. Noraisin’izy ireo ho ohatra amin’izany ny tsy mbola nahatongavan’ny mpitondra, nijery akaiky ny mponina noho ny tondra-drano tany an-toerana. « Tsy mbola nitsidika ny faritra na koa nitondra fanampiana ireo mpiray tanindrazana aminy na variraiventy aza ny minisitra mpiahy, Mahafaly Solonandrasana, tsy mazava », hoy izy ireo, ny haratsian’ny lalana sy ny olan’ny rano fisotro madio…
Eo koa ny nivarotan’ny fanjakana ambongadiny amin’ny vahiny mpitrandraka « uranium » ny tany any Sofia. Zary lasa tompony mangataka atiny ny mponina, araka ny fanamafisan’izy ireo ihany. « Ahiana hiteraka fihetseham-bahoaka izany ho tsy fanekena ny fivarotana tanindrazana. Hijoro hiaro ny harem-pirenena izahay… », hoy ireto parlemantera ireto.
Manoloana izany, nanao antso avo ho an’ny malala-tanana rehetra ny zanak’iny faritra iny mba hitondra fanampiana satria tena ilain’ny mponina any an-toerana izany.
Karazan’ny fampanenoana lakolosy fanairana sy ala nenina izao ataon’ny depiote sy loholona avy any Sofia izao. Hihaona amin’ny tompon’andraikitra isan-tokony izy ireo ary aorian’izany vao handray fanapahan-kevitra amin’ny hatao.